नेपालीलाई कोरोना भ्याक्सिन: संयन्त्र छ, पाउने मिति छैन - TGuff
पर्थ, अष्ट्रेलियाकी नर्स कोभिड—१९ विरुद्ध भ्याक्सिन टेस्टमा सहभागी हुँदै। तस्विरः गेट्टी इमेजेज
कोरोना भाइरसबाट दैनिक ८—१० नेपालीले ज्यान गुमाइरहेछन्। शनिबार ११ जना मृतक थपिएसँगै एउटा सानो भाइरसबाट ज्यान गुमाउने नेपाली चार सय नाघेका छन्, संक्रमित ६२ हजार बढी पुगेका छन्। नागरिक जीवन बचाउन, निर्धक्क सामान्य जीवनयापनमा फर्किन भ्याक्सिन नभइ नहुने भए पनि नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन प्राप्तिको विषय राष्ट्रिय बहसमा छैन।
नागरिक मृत्युको श्रृंखलामा ब्रेक लगाउन नभई नहुने भ्याक्सिन नेपाल कहिले आइपुग्ला? अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया भनिरहेछन्, आउने मंसिर—पुसदेखि कोभिड—१९ भ्याक्सिन प्रयोगमा आउनेछ। काम गर्नेहरुले तथ्य सेयर गर्नु ठूलो कुरा भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी औपचारिक कुराकानीमा भनिरहेछन्, ‘हामी भ्याक्सिन प्राप्तिका लागि गाभी र डब्लुएचओसँग निकट रहेर काम गरिरहेछौं। बन्ने बित्तिकै ल्याउँछौं।’
तथ्यमा कुरो के रहेछ? यो सामग्री नेपालीले कोरोना भ्याक्सिन पाउने संयन्त्र र मिति केन्द्रित छ।
सरकारले निकट रहेर काम गर्दैछु भनेको ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी)को स्विट्जरल्यान्ड, जेनेभास्थित सचिवालयका जेम्स फुकर भन्छन्, ‘नेपाल कोभिड—१९ भ्याक्सिन पाउन न्यून आय भएको देशको सूचीमा छ।’ यो सूची गाभीले जुलाई ३१ मा सार्वजनिक गरेको हो। सूचीमा नेपाल, इथोपिया, बुर्किनाफासो सहितका ३२ देश छन्। हेर्नोस् सूचीः
सन् २०१९ को विश्व बैंक तथ्यांकमा उल्लेख प्रतिव्यक्ति आय आधारमा नेपाल गाभीको ‘लो इनकम क्याटागोरी’ देश सूचीमा परेको जेम्सले सुनाए। प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार डलरभन्दा न्युन हुने देशलाई गाभीले यो सूचीमा राखेको छ। नेपालीको सन् २०१९ को प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २८ डलर थियो। सन् २०२० मा पनि यो बढ्ने छाँट छैन।
हे… हे… कमजोर को रे? 😂
अनि ‘लो—इनकम क्याटागोरी’मा रहेको नेपालको भ्याक्सिन प्राप्ति प्रक्रिया के हुन्छ? जेम्स भन्छन्, ‘नियमाक निकायबाट अनुमोदन र डब्लुएचओबाट प्रिक्वालिफाइड हुने कोभिड—१९ भ्याक्सिन गाभीले पहिला सम्बन्धित देशको जनसंख्याको करिब २० प्रतिशतलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेछ। यो काम यतिबेला कोभाक्स फ्यासिलिटी हेर्छ।’ कोभाक्स विश्व स्तरमा सबै मुलुकलाई भ्याक्सिन पहुँच सुनिश्चित गर्न केही अघि बनाइएको संरचना हो। यसमा ब्लुएचओ, गाभी र इपिडेमिक प्रिपडनेस इनोभेसन्स (सीईपीआई) छन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग वेबसाइटले यो ब्लग लेखिरहँदा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यतिबेला नेपालको जनसंख्या ३ करोड ८६ हजार ९९२ छ। यसको २० प्रतिशत अर्थात् पहिलो चरणमा नेपालका करिब १५ लाख ४३ हजार नेपालीले भ्याक्सिन पाउँछन्।
सुरुमै कोरोना भ्याक्सिन पाउने १५ लाख नेपाली को होलान्? जेम्स भन्छन्, ‘पहिलो चरणको भ्याक्सिन उपलब्धता मानव स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने श्रमिक र सबैभन्दा कमजोर समूहका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने मापदण्ड छ।’ नेपालको अभ्यासमा ‘सबैभन्दा कमजोर समूह’मा देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरु पनि पर्न सक्छन्। यसअघि जनताले पीसीआर टेस्ट नपाउँदा मन्त्री, सत्तारुढ दलका शक्तिशाली नेता एवं सांसदले सहजै पहिला पाएथे।
नेपाल आउने भ्याक्सिन कार्टुनमा युनिसेफको स्टिकर
जेनेभास्थित गाभी सचिवालयका जेम्स फुकर र डब्लुएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालयकी समिला शर्मासँग इमेल र टेलिफोन कुराकानीपछिको निष्कर्ष हो, नेपालमा कोभिड—१९ भ्याक्सिन आगमनमा ५ पक्ष निर्णायक छन्। सरकारको तदारुकता, भ्याक्सिन विकास र नियमन, कोभाक्स फेसिलिटी कार्यक्रम, डब्लुएचओ र युनिसेफ। यसमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारी सबैभन्दा धेरै छन्, निर्णायक छन्।
जेम्सकाअनुसार धनी र गरिब देशहरुमा एकै पटक भ्याक्सिन पुर्याउने लक्ष्य राखेर गाभीले काम गरिरहेछ। ‘कोभाक्स कार्यक्रमको लक्ष्य विश्वका धनी, गरिब सबै देशहरुमा एकै पटक न्यासंगत रुपमा भ्याक्सिनको पहुँच पुर्याउनु हो’, उनी भन्छन्, ‘सबै तहका मानवीय परीक्षण पूरा गरी डब्लुएचओबाट प्रिक्वालिफाइड र नियामक निकायले अनुमोदन गरेका भ्याक्सिन त्यसपछि सम्बन्धित देशहरुमा पुर्याउन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
अहिले देखिएको परिदृश्य कार्यान्वयन भए नेपाल आउने कोरोना भ्याक्सिनको ढुवानी युनिसेफले गर्नेछ। सेप्टेम्बर ३ मा युनिसेफ न्युयोर्क मुख्यालयले भनेको छ, ‘न्युन तथा मध्यम आय भएका ९२ मुलुकमा खोप उपलब्ध गराउने गाभीको कोभाक्स फेसिलिटी कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड—१९ भ्याक्सिन खरिद तथा वितरणको नेतृत्व युनिसेफले गर्नेछ।’ ती ९२ मध्ये एउटा देश नेपाल पनि हो। डब्लुएचओ, गाभी, सीईपीआई कोभाक्स फेसिलिटी कार्यक्रममा छन्। युनिसेफले लिएको जिम्मेवारी कोरोना भ्याक्सिन खरिद, ढुवानी, बन्दोबस्ती तथा भण्डारणका लागि हो।
डब्लुएचओ विज्ञ भन्छिन्, सन् २०२१ मा कुनैबेला
‘डब्लुएचओले अहिले गरिरहेको गृहकार्य र भ्याक्सिन विकासको अवस्था हेर्दा नेपालले कोभिड—१९ भ्याक्सिन पाउने सम्भावित मिति कुन हुनसक्छ?’ मैले सुरुमा टेलिफोन गरी डब्लुएचओ दक्षिण पूर्वी एशिया कार्यालयकी समिला शर्मालाई सोधेँथे। ‘तपाईंले उठाएको विषय अरु धेरै देशहरुको पनि चासोमा छ। यसमा डब्लुएचओ विज्ञले मात्र जावफ दिन सक्छन्। म सहयोग गर्न सक्छु’, उनी प्रो—एक्टिभ रहिछन्, समाधान सुझाइन्। त्यसपछिका २ इमेल कुराकानीपछि सो प्रश्न डब्लुएचओ दक्षिण पूर्वी एशिया निर्देशक पुनम खेत्रापाल सिंह समक्ष पुग्यो।
उनले इमेलबाट जवाफ पठाइन्। भनिन्, ‘भ्याक्सिन प्रयोगमा आउनुभन्दा अगाडि धेरै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण पूरा भएपछि लाइसेन्स र ठूलो परिमाणममा उत्पादनका लागि लाग्ने समयलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाललाई प्रारम्भिक भ्याक्सिन डोज सन् २०२१ मा कुनै बेला उपलब्ध हुनसक्छ।’
गाभी र डब्लुएचओको कुरा सुनेपछि अब भन्न सकिन्छ कोभ्याक्स योजना कार्यान्वयनमा सरकारले जाँगर चलाए अबका ८—१० महिनापछि नेपालीले पहिलो चरणको भ्याक्सिन पाउन सक्छन्। र कोरोनाबाट नागरिक मृत्युको श्रृंखला रोकिन सक्छ। ७ वटा भ्याक्सिन निर्णायक चरणको ‘क्लिनिकल ट्रायल’मा छन्। ब्रिटेनको अक्सफोर्ड, चिनियाँसहित केही भ्याक्सिन डब्लुएचओ क्लिनिकल मूल्यांकन चरणमा छन्।
सेप्टेम्बर १८ सम्मको भ्याक्सिनहरूको परीक्षण अवस्था: डब्लुएचओ
भ्याक्सिन ल्याउनुभन्दा पहिला, आएको अवस्था र नागरिकलाई दिइसकेपछि तीन फरक अवस्थामा सरकारले ३ दर्जनभन्दा बढी काम गर्नैपर्छ।
‘कोरोना भ्याक्सिन पहिलो चरणमा कुन मितिमा नेपाल ल्याउने लक्ष्य राखेर सरकार काम गरिरहेछ? त्यो कहिले आइपुग्छ होला?
भदौ २३ अपरान्ह टेलिफोनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले भने, ‘यो वर्ष नेपालमा कोभिड—१९ भ्याक्सिन आउँदैन। २०७८ पुससम्म आउँछ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ।’
मतलब ढिलोमा २०७८ पुसभित्र नेपालीले पहिलो चरणको कोरोना भ्याक्सिन पाउँछन्। र पुसको ४ महिनापछि वर्ष फेरिन्छ अर्थात् २०७९ सुरु हुन्छ। अनि दोस्रो चरणको भ्याक्सिन? यो अहिलै भन्न सक्ने अवस्था छैन। निश्चत यो हो वर्ष २०७९ संसद र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वर्ष हो।
सम्बन्धित सामाग्री: नेपालीले कोरोना भ्याक्सिन कहिले पाउँछन्?